Global Voices नेपालीमा » वुहानबाट काेभिड–१९ डायरी: जब मानिसहरू वस्तु बनाइन्छन् · Global Voices नेपालीमा » Print
वुहानबाट काेभिड–१९ डायरी: जब मानिसहरू वस्तु बनाइन्छन्
अनुवाद पोष्ट गरिएको4अप्रिल 2020 16:33 GMT 1	 · लेखक Winston Chiu अनुवादक Mahesh Shrestha
श्रेणी : पूर्व एशिया, चीन, नागरिक मिडिया, प्रकोप, वाक स्वतन्त्रता, विरोध, स्वास्थ्य
रक्षात्मक पाेशाक तथा सामग्री सहित उहानकाे नदी छेउमा उभिएका एक व्यक्ति । (तस्वीर साैजन्यः गुओ चिङ्)
याे लेख स्वतन्त्र फिल्ममेकर तथा महिलावादी विज्ञ एइ सियाउमिंग  र महिलावादी अभियन्ता गुओ चिङ् ले संयुक्त रूपमा लेखेकाे दैनिकीकाे तेस्राे श्रृङ्खला हाे । दुवैजना काेभीड–१९ काे उद्गमस्थल वुहानमा बसाेबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूका दैनिकीकाे पहिलाे र दाेस्राे श्रृङ्खला यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ ।
याे तेस्राे भाग सन् २०२०, फेब्रुअरी ५ देखि १० बिचमा लेखिएकाे हाे । जुन अवधिमा वुहानमा काेराेना भाइरसकाे संक्रमण फैलिएकाे पत्ता लगाउने पहिलाे व्यक्ति डा. ली वेन्लियाङ काे मृत्यु भएकाे थियाे । यी दैनिकीका सकल लेख भने ‘म्याटर न्यूज'मा प्रकाशित छन् ।
गुओ चिङ्: फेब्रुअरी ६, २०२० 
एक पार्क बाहिर राखिएको सन्देश: ‘कृपया पार्क प्रवेश गर्नुअघि मास्क लगाउनुहोला।’ (तस्वीर साैजन्यः गुओ चिङ्)
मेराे एकजना इन्टरनेटमा भएकी साथीले सहयाेगकाे अपिल सहित एउटा सन्देश पठाइन् । उनका श्रीमान र सासू ससुरालाई काेभीड–१९ भएकाे पुष्टि भएछ । दुर्भाग्यवस, पछि उनका सासू–ससुराकाे मृत्यु भयाे । उनका एकजना चार वर्षकाे र अर्काे १ महिनाकाे गरी दुईजना छाेराछाेरी छन् । उनमा पनि भाइरसकाे लक्षण देखिएकाे हुँदा उनी पनि हाल संगराेध अर्थात् क्वारेन्टिनमा छिन् । उनलाई छाेराछाेरीकाे स्याहारसुसार कसरी गर्ने भन्ने कुराेले पिराेली रहन्छ । मैले उनलाई कल गरे । उनले आफ्ना छाेराछाेरीकाे हेरविचार कसैले गरिदिए हुन्थ्याे भनिन् । उनकाे स्वर पूर्ण रूपमा चिन्तित सुनिन्थ्याे । उनलाई अब के हुन्छ भन्ने थाहा थिएन र उनकाे संगराेधकाे समयमा उनका छाेराछाेरीकाे हेरविचार हाेला कि नहाेला भन्ने कुराकाे दाेसाधमा उनी थिइन् ।
गुओ चिङ्: फेब्रुअरी ७, २०२० 
मैले रातीकाे समयमा साथीहरूसँग गफ गर्नका लागि एउटा तालिका बनाएकाे छुँ । आज रातीकाे हाम्राे विषय हाे, मृत्यु ।
हामीले हाम्राे मृत्युकाे भय सम्बन्धी कुराकानी गर्याैं ।
केही मानिसहरू मृत्यु अघि हुने पीडालाई लिएर त्रसित थिए ।
केही मानिसहरू भने आफू र आफ्नाे चेतना लाेप हुने कुरालाई लिएर भयभित थिए ।
हामीले महामारीका बेला हुने आकस्मिक तथा अकाल मृत्युका बारेमा कुरा गर्याैं । उनीहरूका अन्त्येष्टिका लागि ठाउँ हुने छैन । उनीहरूले आफ्ना साथीभाइहरूसँग विदा समेत हुन पाउने छैनन् । अस्पताल समेत पत्ता लाग्ने छैन ।
याे बिहान, म बेलाबेलामा झस्किएर ब्युझिए । मैले सुत्ने धेरै प्रयत्न गरे, तर म सुत्न सकिन । म ब्युझिएर संसारमा के भइरहेकाे छ भनी जान्न चाहन्न थिए । अन्तमा म उठे र मेराे माेबाइल फाेन अन गरे । त्यहाँ आएका प्राय सन्देशहरू ली वेन्लियाङ का बारेमा थिए । एकजनाले एउटा फाेटाे खिचेर पठाएकाे रहेछ । जसमा उनीहरूले मास्क लगाएका थिए र त्यहाँ “मैले बुझ्न सकिन” भनी लेखिएकाे थियाे ।
म राेए । यस्ताे घृणित संसारमा कसरी बाच्न सक्छु? यद्यपि, मैले बाच्नै पर्छ किनकि याे मेराे आफ्नाे प्रतिराेधात्मक क्षमताकाे जाँच पनि त हाे ।
“हामी बुझ्न सक्दैनाैं ।” लेखिएकाे मास्क लगाएका मानिसहरू । (तस्वीर स्राेतः इन्टरनेट, फाेटाे साैजन्यः गुओ चिङ्)
गुओ चिङ्: फेब्रुअरी ८, २०२० 
मसँग धेरै तरकारीहरू बाँकी छैनन्; त्यसैले पनि केही खानेकुराहरू किन्न सुपरमार्केट जानुछ ।
केही मानिसहरूले याे महामारी सकिनासाथ ‘हामीलाई के भएकाे थियाे भनी हामीले चाँडै बिर्सने छाैं’ भनी बताए । तर, बिर्सन यति सजिलाे कहाँ छ र! हामीले भेटेका सबै मानिसहरू सम्झन नसकाैंला तर हामीमध्ये धेरैले अहिलेकाे याे अवस्था कसरी बिर्सन सकाैंला र! हामीले अहिले के भइरहेकाे छ र हामीले कसलाई भेट्याैं भनी अरूहरूसँग कुराकानी गर्छाैं; जसरी सार्स (SARS) र वेन्चुआन भूकम्प का बारेमा अझ पनि हामी कुरा गर्छाैं । हामी हाम्राे जिवनभर अहिलेकाे सम्झना लिएर बाच्नेछाैं ।
हामी बिर्सने कुरालाई लिएर किन चिन्तित हुन्छाैं? हामी महामारी पछि याे समाजमा सुधार आउँदैन की भनी चिन्तित छाैं । हामी हाम्राे समाजसँग अर्काे विपद् भई हालेमा यसकाे सुपरिवेक्षण गर्ने असल प्रणालि छैन भनी चिन्तित छाैं । हामी चिन्तित छाैं किनकि कतिपय मानिसहरूले बिना कुनै अर्थ बलिदान समेत दिनुपर्ने हुन्छ ।
मैले साझ एकजना साथीसँग च्याटमा कुरा गरे । हामीले इन्टरनेटमा ली वेन्लियाङकाे स्मृतीमा राती ८ः५५ देखि ९ः०५ सम्म बत्ति निभाउने र माैनधारण गर्ने र ९ः०० देखि ९ः०५ बजेसम्म आ–आफ्नाे काेठाकाे झ्यालबाट बत्तिकाे प्रकाश बाहिर देखाउने कार्यक्रमकाे पाेस्ट देख्याैं । मेराे त्यति धेरै छिमेकीहरू थिएनन् र म कमै मात्र नजिकका भवनहरूमा बत्ति बलेकाे देख्थे । राती ९ः०० बजे मैले घरबाहिर केही बत्तिका प्रकाशहरू यताउती देखे । हामीले पनि एकर्काका लागि बत्ति बाल्याैं । याे त्याे प्रकाश हाे, जसले नाकाबन्दीलाई प्रभाव पार्न सक्छ ।
हामीले पीडकहरू विरूद्ध बाेलेका छाैं र सत्यमा अडिग रहने इमान्दार मानिसहरूलाई श्रद्धा व्यक्त गरेका छाैं । समाजमा मानिसहरू सत्य बाेल्ने आँट गर्दैनन्; जहाँ सत्य बाेलेकै भरमा मानिसहरूलाई दण्ड दिइन्छ; जहाँ सत्य बाेलीलाई मूल्यवान ठानिन्छ । ली वेन्लियाङ एक यस्ता व्यक्ति थिए, जसले हामीलाई सत्य सुनाए ।
एइ सियाउमिंग: फेब्रुअरी ८, २०२० 
हिजाे साझ म मेराे बार्दलीमा बसेर डा. ली वेन्लियाङकाे स्मरणार्थ केही लेखिरहेकाे थिए । अध्याँराे र जाडाे बढेसँगै मैले लेख्न छाडे । मैले यसाे नगरेकाे भए, डा. लीकाे मृत्युले पारेकाे गहिराे पीडा व्यक्त गर्न सक्दिन थिए हुँला । यही हप्ता मात्र मैले मेरा धेरै साथीहरूका परिवारका पाका सदस्यहरूका मृत्यु भएकाे सन्देश प्राप्त गरेकाे थिए । आज बिहान मात्र मेराे एकजना असल साथीकाे भाइले उनकाे परिवारका एक सदस्य सिकिस्त अवस्थामा रहेकाे बताएकाे थियाे ।
तालाबन्दी अर्थात् लकडाउनका बेला मेराे बुबा बित्नुभयाे । याे महामारीकाे कथामा उहाँलाई समावेश नगरेकाे भए हुन्थ्याे तर हामीमध्ये कसैले पनि मृत्यु कतिखेर आउँछ भनी पूर्वानुमान गर्न सक्दैनाैं । म भन्नसक्छु की उहाँकाे मृत्युसँग काेभीड–१९ काे कुनै पनि सम्बन्ध छैन किनकि गएकाे आधा वर्षमा उहाँ बाहिर निस्कनु भएकै छैन । यद्यपि, मेरा शब्दहरूलाई प्रमाणित गर्ने कुनै पनि चिकित्सकीय प्रमाण छैन । अहिले मेराे सहयाेगी र म अरूहरूबाट अलग वा सेल्फ–आइसाेलेसनमा छाैं । हामी १४ दिनपछि मात्र बाहिर निस्कन पाउँछाैं ।
वास्तवमा, मेराे बुबा आफ्नाे मृत्युकाे सही समय राेज्नमा बुद्धिमान थिए झै लाग्छ किनकि वुहान सरकारले फेब्रुअरी ५ मा आफ्नाे कार्य टाेलीलाई आवास क्षेत्रमा प्रवेश गरी हरेक अपार्टमेन्ट छानबिन गर्ने याेजना बनाएकाे थियाे । यदि चार प्रकारका लक्षण भएका काेही व्यक्ति (संक्रमण पुष्टि भएकाे, शंकास्पद लक्षण भएकाे, ज्वराे आएकाे मानिस र संक्रमण पुष्टि भएका मानिसकाे सम्पर्कमा आएका मानिस) फेला परेमा उनीहरूलाई क्वारेन्टिन अर्थात् संगराेधमा राख्नका लागि लगिन्छ । चिकित्सा उपचार खाेजिरहेका मानिसहरूका लागि याे असल नीति थियाे । तर म तपाईंलाई आफ्नाे स्व–हेरविचार गर्ने क्षमता गुमाइसकेकाे ९६ वर्षिय वृद्धलाई याे प्रक्रिया कति दिक्कलाग्दाे हुन्थ्याे हाेला भनी बताउन सक्दिन । वास्तवमा, मैले जब उक्त घाेषणाका बारेमा थाहा पाए, मैले मेराे परिवारका लागि कुनै पनि कदम उठाउँछु भन्ने मनसाय बनाइसकेकाे थिए किनकि म मेराे बुबालाई जिउँदाे हुँदा हुँदै संगराेधमा राख्नका लागि लान दिन्नथे ।
गुओ चिङ्: फेब्रुअरी ९, २०२० 
कसले गल्ती स्वीकार्दैनन्?
अभिभावकहरूले बिरलै गल्ति स्वीकार्छन् । जब उनीहरूले गल्तिकाे महसुस गर्छन् अनि सधै भन्ने गर्छन्, “याे तिम्रै भलाइकाे लागि हाे ।” उनीहरू छाेराछाेरीहरूले तिनका असल नियतलाई स्वीकार्दैनन् भन्ठानी यसाे भन्ने गर्छन् ।
यौन दुर्व्यवहार गर्नेहरूले पनि भलै गल्ति स्वीकार्छन् । उनीहरू त उल्टाे पीडितकाे चरिणलाई दाेष देखाएर मुद्दाबाट उम्कन खाेज्छन् । उनीहरू भन्छन्, “तिमीहरूले साह्राै छाेटाे लुगा लगायाैं ।” “तिमी राती राती बाहिर जानु हुन्न थियाे ।” वा “तिमीले मलाई माेहित बनायाैं, आकर्षित गर्याै ।”
मलाई उदेक लाग्छ कि आफ्ना स्वाभिमान र अधिकार नै हनन भएका मानिसहरूप्रति समेत गल्ति स्वीकार्न साह्रै गाह्राे छ । के ली वेन्लियाङले माफि पाउँलान्?
म सुत्न जानु अघि, म आफ्नाे माेबाइल फाेनलाई अनलाइन नै राख्ने गर्छु । मैले फाेनमा फेब्रुअरी ४ मा एउटा अफिसिएल अकाउन्टबाट प्रकाशित भएकाे एउटा रेकर्डेड आवाज पाए । उक्त आवाज सान्डाेङ प्रदेशबाट एकजना केटीले पठाएकी थिइन् । उनले वुहानकाे मेयरकाे हटलाइनमा कल गरेकी थिइन् । उक्त फाेन कलमा, उनले वुहानका लागि भनी सान्डाेङ प्रदेशले राहत स्वरूप पठाएकाे ३५० टन तरकारीहरू वुहान सकारकाले बेच्न हुन्नथ्याे भनी आलाेचना गरेकी छिन् ।
उनले स्राेतहरूकाे वितरण गर्दा अग्रपङ्तिका कामदारहरूले चाँडाे भन्दा चाँडाे पाउन् भन्नका लागि केही सुझावहरू पनि दिएकी छिन् ।
उक्त रेकर्डेड आवाज साह्रै नै उत्प्रेरित गर्ने खालकाे छ । उक्त फाेन कलकाे अन्त्यमा, उनले पक्कै पनि मेयरले आफूलाई जवाफ फर्काउने आशा राखेकाे बताएकी छिन् । प्रायजसाे हामी सबै शक्तिविहिन भएका बेला सरकार नै जवाफदेही हुनुपर्ने कुरा उनले राखेकी छिन् । याे असम्भव अभियान हाे, तर यस्तै मानिसहरू सामाजिक परिवर्तनका लागि प्रेरक तत्त्व हुन् ।
गुओ चिङ्: फेब्रुअरी १०, २०२० 
मेराे गए रातीकाे खाना पाेरिज अनि भुटेको च्याउ र ससेज थियाे ।
तालाबन्दी हुनुभन्दा अघिल्लाे दिन मैले साे च्याउ किनेकाे थिए । त्यसलाई मैले मेराे रेफ्रिजेरेटरमा १० दिन भन्दा बढी राखिसकेकाे थिए । जसमध्ये एउटा च्याउ कालै भैसकेकाे थियाे तर पनि मैले त्याे काटे । त्यसपछि मलाई अलि डर लाग्याे । मैले अनलाइनमा खाेजी गरे । जसमा च्याउमा त्यसरी कालाे रंग आउनु ढुसीकाे कारणले हाे र त्याे नखाएकै राम्राे हुने सुझाव पाए । हाेसियारी अपनाउनका लागि मैले उक्त च्याउ फालिदिए ।
यदि हामीले धेरै तरकारीहरू भण्डारण गर्याैं भने तिनीहरू कुहिन्छन् । यसरी हामीले खाद्यान्न खेर फालिरहेका हुन्छाैं । तथापि, हामी बाँच्नकै लागि भए पनि तरकारीकाे भण्डारण त गर्नैपर्छ ।
केही दिन अघि मात्र मेराे एकजना साथीले ‘सर्भाइभिङ डिजास्टर’  नामक टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्न सुझाएकी थिइन् । उक्त वृत्तचित्र श्रृङ्खलाले मानिसहरूलाई शिक्षित बनाउनका लागि विपद्लाई हाम्राे वास्तविक जिवनमा नाटकिय रूपमा प्रस्तुत गरेकाे छ । आज दिउसाे मैले यसकाे एउटा भाग हेरे, जुन विमान अपहरण सम्बन्धी थियाे । जसमा एकजना व्यक्तिले अपहरणकारीहरूलाई कसरी वशमा पारी आफ्नाे ज्यान जाेगाउने भन्ने बारेमा सिकाउछ । त्यसमा उनले अपहरणकारीकाे पाखुरा र खुट्टा बाँध्दै भन्छन्, “अब हामी उनीहरूका दृष्य हटाउनेछाैं । याे सबै नियन्त्रण वा वशमा पार्ने सम्बन्धी हाे । हामीले उनीहरूकाे शक्ति, दृष्टिकाेण, उनीहरूका क्षमतालाई थिची, हामी जतिसक्दाे बाेल्न सक्नुपर्छ । हामीले आवश्यक परेमा तिनका कान उखेली त्यसलाई वस्तु बनाउन समेत सक्नुपर्छ ।”
उक्त बेला, मैले आफू अपहरणकारी भएकाे महसुस गरे ।
हामीलाई साेही अपहरणकारी जस्तै व्यवहार गरिएकाे छ; यद्यपि हामी ती क्षमताहरूबाट बन्चित छाैं । जे हाेस्, हामीले हेरेका र सुनेका सूचनाहरू फिल्टर गरिएका छन् र हामीले जहिले पनि आफूलाई माैन ठान्छाैं । ली वेन्लियाङका बारेमा बाहिर आएका सूचनाहरू बिस्तारै हराउँदैछन् । याे समाजले हामीलाई सेल्फ–सेन्सरसिपतर्फ धकेल्दैछ । केहीले त सक्रिय रूपमा अरूका सूचना सेन्सर वा कटाैती गर्छन् र अरूलाई उपयुक्त नहुने र हानिकारक सन्देशहरू हटाउन माग समेत गर्छन् ।
URL to article: https://ne.globalvoices.org/2020/04/04/2813/
 एइ सियाउमिंग: https://matters.news/@tianguowawa
 गुओ चिङ्: https://matters.news/@GuoJing
 डा. ली वेन्लियाङ: https://globalvoices.org/2020/02/07/coronavirus-death-of-whistleblower-li-wenliang-sets-chinese-social-media-on-fire/
 गुओ चिङ्: फेब्रुअरी ६, २०२०: https://glosbe.com/en/ne/whistle-blower
 गुओ चिङ्: फेब्रुअरी ७, २०२०: https://matters.news/@GuoJing/%E6%88%91%E4%BB%AC%E6%98%AF%E5%BD%BC%E6%AD%A4%E5%9C%A8%E9%BB%91%E6%9A%97%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%85%89-%E9%83%AD%E6%99%B6%E7%9A%84%E6%AD%A6%E6%B1%89%E5%B0%81%E5%9F%8E%E6%97%A5%E8%AE%B0-2-5-2-8-bafyreiefliaexczixm6o27fkr4pwqmtakwigtnibbwde333abghmzm5nmy
 वेन्चुआन भूकम्प: https://en.wikipedia.org/wiki/2008_Sichuan_earthquake
 एइ सियाउमिंग: फेब्रुअरी ८, २०२०: https://matters.news/@tianguowawa/%E8%89%BE%E6%9B%89%E6%98%8E%E6%AD%A6%E6%BC%A2%E6%97%A5%E8%A8%982-%E7%96%AB%E5%9F%8E%E5%86%85%E7%9A%84%E6%B0%B8%E5%88%AB%E6%97%B6%E5%88%BB-bafyreiddrqgno3xevqvqn6zt2ip3nylkharxebpp5wctgqnz5fchws5cqu
 गुओ चिङ्: फेब्रुअरी ९, २०२०: https://matters.news/@GuoJing/%E8%BF%99%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%98%AF%E6%88%91%E6%9C%80%E5%90%8E%E4%B8%80%E5%A4%A9%E5%87%BA%E9%97%A8-%E9%83%AD%E6%99%B6%E7%9A%84%E6%8D%82%E6%B1%97%E9%A3%8E%E5%B0%98%E6%97%A5%E8%AE%B0-2-9-2-11-bafyreihm6jl7vgbzh4z6srmijgo7xmzxdurfxwshviciae4dr6il2bsifi
 ‘सर्भाइभिङ डिजास्टर’: https://en.wikipedia.org/wiki/Surviving_Disaster_(TV_series)